newspaper and idea: သြော် မိန်းမ မိန်းမ
“သူ” သို့မဟုတ် အဝေးရောက်တမ်းချင်း
သြော် မိန်းမ မိန်းမ
Wednesday, June 11, 2008 by KO WAI
မိန်မဟူဘိ ထိုကတ္ကိက မရှိမကောင်းရှိမကောင်း မပေါင်းလဲခက် ပေါင်းလဲခက်၏ ဆိုတဲ့ မန်လည်ဆရာတော်ဘရားကြီးရဲ့စာသားလို ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ အမြင်လို ကျနော်တို့ ဘလောက်ဂါ ပုရိသ တို့ရဲ့ အမြင်လေးတွေပါ ကျန်တဲ့ဘလောက်ဂါများလဲဖတ်ပြီး ကိုယ့်အမြင်လေးတွေကိုဝေမျှရအောင် ကွန့်မန့်လေးများပွတ်ခဲ့ပါနော်
ယောင်္ကျားတွေကို နူးညံ့သိမ်မွေ့စေတဲ့ သက်ရှိဖြစ်နိုင်သလို ရိုင်းစိုင်းခက်ထန်သွားစေနိုင်တဲ့ သတ္တ၀ါတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်.
မိန်းမတွေက တစ်ခါတစ်လေမှာ ကာတွန်းစာအုပ်နဲ့တူပြီး တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျမ်းစာတစ်အုပ်လောက် ဖတ်ရခက်တယ်
မိန်းကလေးတွေက မရှိမကောင်း၊ ရှိမကောင်း
မိန်းမတွေ စိတ်က မြန်မာပြည်ရဲ့ လျှပ်စစ်မီးလိုပဲဗျ...
ကျွန်တော်အတွက်တော့ မိန်းမဆိုတာ... နားလည်ရခက်တဲ့ လူသားပါပဲ။ အဲဒါကို မာယာလို့ ပြောရမလားဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မဝေခွဲတတ်ပြန်ဘူး။
ပေးဆပ်တဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ဖြူစင်သန့်ရှင်းခဲ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်ကို တန်ဖိုးမထား ပစ်ပယ်ရှောင်ခွာခဲ့တာ မာယာပဲလား။ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ပန်းပျိုးခဲ့တဲ့လက်ကို ရက်ရက်စက်စက် ပုတ်ထုတ်ခဲ့တာ မာယာပဲလား။ အလိုလိုက်လို့ အမိုက်စော်ကားခဲ့တာ မာယာပဲလား။ နားလည်ရခက်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေကြားမှာ အကြင်နာတွေ ပိုခဲ့ရတဲ့ အဖြူရောင်နေ့ရက်တွေကို ပြန်စဉ်းစားရင်း... မာယာ မာယာ မာယာ...
မိန်းမတိုင်းမှာ မာယာဆိုတဲ့ အမူအကျင့်လေးက အနည်းနဲ့အများတော့ ရှိကြပါတယ်။ တချို့က ထုတ်မသုံးကြပါဘူး။ တချို့က မသိမသာလေး သုံးကြပါတယ်။ တချို့ကျတော့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ စနစ်တကျ အကွက်ချပြီး သုံးကြပြန်တယ်။ တချို့ကတော့ တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် မသိစိတ်မှာ မာယာလေးတွေ များနေတတ်ပါတယ်။ တချို့က မာယာများတယ်လို့ ပြောရင် စိတ်ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ တချို့ကျတော့ မာယာများတဲ့ မိန်းခလေးလို့ အပြောခံရရင် ဂုဏ်ယူနေတတ်ပြန်ရောဗျာ။
အင်း... မိန်းမဆိုတာ မာယာတွေနဲ့အတူ ယှဉ်တွဲနေတဲ့ လူသားတစ်မျိုးလို့ပဲ မှတ်ချက်ချမိခဲ့ရင်....
On June 12, 2008 at 9:45 AM မင်းယွန်းသစ် said...
Hey pls don't tell her what i said.. heee :P
On June 12, 2008 at 10:26 AM နှင်းပွင့်ဖြူလေး said...
အဟတ် သြော်မိန်းမ .......မိန်းမ ဆိုပါလား
တော်သေးတာပေါ့ မိန်းမနဲ့ယောကျာ်း၂ မျိုးပဲရှိလို့
တကယ်တော့ မိန်းမဆိုတာ ယောကျာ်လေးရဲ့ ပျောက်နေတဲ့ တစ်ဘက်ခြမ်းလေ။
On June 12, 2008 at 12:41 PM JulyDream said...
အဲဒီ ပျောက်နေတဲ့ တစ်ခြမ်းကို ရှာရတဲ့ အချိန်လေးမှာ... မိန်းမ ဆိုတာ.... မာယာတွေနဲ့ပါလား ဆိုတာကို သိခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ လက်တွေ့ဘ၀က ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာပေါ့။
ပုခက်လွှဲသော လက်ကို ရိုသေလျှက်...
On June 14, 2008 at 7:05 PM ပေါက်ကရ said...
မိန်းမ = မ မိန်း
မ = အချွန်နဲ. “ မ ” တက်ပြီး
မိန်း = လိုချင်တာ ရရင် “ မှိန်း ” နေတက်သည် ။
ထင်တာပဲ ။း)
On June 16, 2008 at 9:30 AM ပေဖူးလွှာ said...
အိမ်က မိန်းမနဲ့ ရန်ဖြစ်ထားတယ် ထင်တယ်
ယောကျာ်းတွေ မိန်းမမကောင်းကြောင်း ပြသနာမတက်မချင်း မစဉ်းစားကြဘူးဆိုပဲ
ဒါပေမဲ့ blogger တွေ ရေးထားတဲ့ မိန်းမအကြောင်း တစ်ခုမှ မလွဲဘူး ^.^
On June 18, 2008 at 4:26 AM Heartmuseum said...
On June 19, 2008 at 9:41 AM စိုးထက် - Soe Htet ! said...
နောက်ကျ နေပြီ ...
ကိုယ်က မှန်မှန်နေရင် သူ့ကို ဘာမှ ထည့်စဉ်းစားစရာ မလိုပါဘူး ... အတူတူပါပဲ ... ခွဲ စဉ်းစားဖို့ မလိုပါဘူး ....
On June 21, 2008 at 9:44 PM eitar said...
မဟုတ်ပါဘူး...မင်းထင်သလိုမဟုတ်ပါဘူး....ဟီဟီ စိုင်းစိုင်းသီချင်းဝင်ဆိုသွားတယ် ..:D
On June 23, 2008 at 9:44 PM mgthonnya said...
On June 26, 2008 at 3:33 PM ရွှေပြည်သူ said...
မိန်းမနဲ့ယောက်ျားဆိုတာ Type မတူကြတဲ့ လူနှစ်မျိုးလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ မိန်းမမှာလည်း မိန်းမဆန်တဲ့ ကောင်းတဲ့အချက် မကောင်းတဲ့အချက်တွေ ရှိသလို ယောက်ျားမှာလည်း ယောက်ျားဆန်တဲ့ ကောင်းတဲ့အချက် မကောင်းတဲ့အချက်တွေ ရှိကြတာပါပဲ။ အားလုံးက လူတွေချည်းပဲ ဆိုတော့ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ကောင်းတဲ့လူနဲ့ မကောင်းတဲ့လူ ဆိုပြီး ရှိကြမှာပါပဲ။ ကျွန်မ အမြင်လေး ပြောကြည့်တာပါး)
On June 28, 2008 at 11:06 PM savethehuman said...
မိန်းကလေးတွေအများစုက ယောင်္ကျားလေးတွေကို ဆရာလုပ်ချင်ကြတယ်။ သူတို့သိ၊ သူတို့တတ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အနိုင်ယူတာတော့ ပေးမလုပ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဟဲဟဲ